अन्तवार्ता Archives - Page2of3- Tudikhel - Nepal's Popular Digital NewsPaper
विद्यार्थी साथिहरुले भावि सभापति तपाई हो भनिरहनु भएको छ : नीता
निता कुलुङ राई, उपसभापति, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन पथरी बहुमुखी क्याम्पस, पथरीशनिश्चरे—१, मोरङ यतिवेला के गर्दै हुनुहुन्छ ? क्याम्पस जाने । पढ्ने । साथिहरुसँग भेटघाट । विद्यार्थीहरुको समस्या बुझ्ने, समाधानमा सकेको पहल गर्ने । यस्तै भइरहेको छ । मेरो मुख्य प्राथमिकता अध्ययन नै हो । स्ववियु निर्वाचन तोकियो त्यही मितिमा हुन्छ कि हुन्न जस्तो लाग्छ ? त्रिभुवन विश्व विद्यालयले फागुन १४ गते...
गुमनाम याङमा उपत्यका
याङमा–उपत्यकाको यो छेर्चेन–ताल, अनि ताल नजिकै फुलेको यो निलो–फूल र यहिँ ताल कै आसपासमा चौरी–गोठ बसाएर जीवन खोजि रहनु भएकी हाम्री फुटिक भाउजु । यो प्रकृति र मानिसको अन्तर सम्बन्ध कति प्रगाढ हुँदो रहेछ । दिलविक्रम आङदेम्बेको फेसवुक वालबाट ...
कुमार र सञ्जुहाङ लिम्बुवान आन्दोलनका गद्दार पात्र हुन : वीर नेम्बाङ
वीर नेम्बाङ लिम्बुवान अभियान र आन्दोलनका सस्थापक नेता हुन । कला साहित्यको संरक्षण र संवद्र्धनमा लागेको नेम्बाङ लिम्बू भाषाको विद्यालय खोले बापत नै राज्यबाट दण्डित हुनु परेपछि पार्टी नै स्थापना गरेर थप आन्दोलनमा होमिए । हक हित र लिम्बुवान राज्य स्थापनार्थ उनले २० डिसेम्बर १९८६ मा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको स्थापना गरे । सन् १९५८ मा पाँचथरमा जन्मिएका नेम्बाङ उमेरले ६० टेकेका छन् भने आफैले स्थापना...
समान पहिचान स्थापित गराउनका लागि मेरो उम्मेदारी : शर्मा
राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा कतारमा एक स्थापित व्यवसायी हुन । १५ बर्षदेखि उनी कतारमा विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् । उनी मध्यपूर्वमा गैरआवासीय नेपाली माझ परिचित व्यक्ति हुन । गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थ गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राट्रिय समन्वय परिषदको अभियानमा सुरुदेखि नै जोडिएका शर्मा अहिले आफै नेतृत्व गर्न अगाडी सरेका छन् । काठमाण्डौमा जारी आठौँ विश्व सम्मेलनमा मध्यपूर्व क्षेत्रीय संयोज...
संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपालका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराक विद्यार्थी कालबाट नै प्रगतिशिल आन्दोलनमा सहभागी भए । त्यहिबेलाबाटै जातिय मुक्ति र पहिचानपक्षधर लिङ्लदेन लगायत नेताहरुले ६० को दशकमा स्थापना गरेको संघीय लिम्बुवानले संघीयता र पहिचानको आन्दोलनमा ६० दशक यता देशमा निकै ठूलो प्रभाव पार्यो । पार्टीको आन्तरीक जीवनमा पनि निक्कै आरोह अवरोह आए । टुक्रिएर झण्डै आधा दर्जन पार्टी बन्यो तर पनि लिम्बुवान ...
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय सदस्य प्रेमराज लावतीसंग तीन दशक लामो राजनीतिक यात्राको अनुभव छ । पाँचथर जिल्लाको लुम्फाबुङ गाविसमा वि.स. २०३० सालमा बुवा पदमबहादुर लावती र आमा स्व. कान्छिहाङमा लावतीको कोखबाट लावतीको जन्मभएको हो । गाउँ नजिकैको विद्यालयबाट एसएलसी उर्तिण गरेपछि उच्च शिक्षाका लागि उनी सुनसरी क्यापसमा भर्ना भए । त्यस क्याम्पसबाट पमाणपत्र तह पुरा गरे । त्यसपछि काठमाण्डौको रन्नराज...
किरात राई विद्यार्थीसंघको ८ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन २०७३ मंसिर २६, २७ र २८ गते इलाममा हुदैछ । यस संगठनको २०५६ भदौ १७ गते स्थापना भएको हो । किरात राई विद्यार्थी संघ राई विद्यार्थीहरुको साझा संगठन हो । सामुदायिक तथा साँस्कृतिक पहिचानका लागि स्थापना भएको यो संगठन मार्तसंस्था किरात राई यायोक्खाले किरात राज्य प्राप्तिको आन्दोलन अघि सारेसंगै आन्दोलनमा होमिएको छ । राष्ट्रिय सम्मेलन नेतृत्व परिवर्तन मात्र ...
सवै जातिय संगठनहरुबाट समर्थन प्राप्त भइरहेकाले मेरो जीत निश्चीत छ : सर्वधन राई
आदिवासी जनजाती महासंघको ९औं महाधिवेसन पौष २ गतेबाट चितवनमा सुरु हुंदैछ । जहाँ देशभरका आदिवासी जनजाति महासंघमा आवद्ध ५६ वटा जातिय संघको सहभागीता रहनेछ । महाधिवेसनले आगामी कार्यदिशा र नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ । त्यहि नेतृत्वको बागडोर संहाल्न एक कुशल व्यक्ति अघि सरेका छन् । जसले विद्यार्थी राजनीति, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले, किरात राई यायोक्खामा लामो समय काम गरीसकेका छन् । उनी संभावित अबको आ...
मातृभाषाको संरक्षण हामीले नै गर्ने हो : पदम वालाहाङ राई
पदम वालाहाङ राई मुलत भाषाविद, मातृभाषा अभियन्ता हुन । खास गरि बान्तावा भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासमा वालाहाङको ठूलो योगदान रहेको छ । उनी भाषा संरक्षणमा समूहिक प्रयासका हुनुपर्छ भन्ने विश्वास राख्छन् । वालाहाङ राईकै सम्पादनमा एक दशकबाट बुङ्वाखा राष्ट्रिय मासिक पत्रिका प्रकाशन भईरहेको छ । यो बान्तावा भाषाको मानक पत्रिका हो । यो पत्रिका नेपाल सरकार, प्रेस काउन्सिलबाट पुरस्कृत समेत भई सकेको छ ।...
१९ माघ २०६१ को शाही ‘कु’ विरुद्ध काठमाडौंका सडकहरुमा चर्काे भाषण गर्ने विद्यार्थी नेता राजन राई तत्कालीन सात दलका प्रमुख नेताहरुसंगै जेलमा कोचिए । तीन महिनापछि जेलबाट छुट्नासाथ अनेरास्ववियु जनआन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक बनेर दोस्रो जनआन्दोलन सफल पार्न सहयोग पुरयाए । जनआन्दोलन सफल बनाएर गाउं फर्केका राजन ‘किन–किन’ एल्बममार्फत पुन साँगीतिक क्षेत्रबाट पो उदाए । उनले लेखेको ‘.........जीन्दगी यो...